Intsha entsha ye-Android 4.2.2 AOKP yeQela leTsunami X ye-Samsung Galaxy S | I-Androidsis
I-Samsung Galaxy S, iRom Tsunami X4.5 uhlaziyo 9/3/13
Nanku ndikuzisa uhlaziyo olutsha yenye yeerom ezisetyenzelwe kakhulu Samsung Galaxy S Modelo GT-I9000.
Ukuthandana kweqela le ITsunami yeqela isekwe kwikhowudi yemvelaphi I-AOKP kulwakhiwo lwakho lwe Android 4.2.2 kwaye inokuphuculwa okuninzi kunye nokusebenza kwe-Smartphone yethu engacimi mlilo.
Phakathi kwezinto ezintsha ekufuneka ziqaqambisiwe koku Inguqulelo entsha ye-romKufanelekile ukuba sikhankanye ukufudumala kwayo kunye nokuncitshiswa kwezicelo ezifakwe ngokungagqibekanga kwinkqubo yokwahlulahlula inkqubo, ngaloo ndlela iyenza ibe "yi-lite" ngakumbi kunye neziphumo ezingcono zokuphuma kunye nokuphendula kwenkqubo.
1 Utshintsho lweRom
2 Izidingo zokukhanyisa le rom
3 Iifayile ziyafuneka ukufaka i-rom
4 Indlela yokudanyaza yaseRoma
Isiseko se-Android 4.2.2 AOKP
Ulawulo lwe-AOKP rom
Ubomi bebhetri obungcono
Amanzi angenakuthelekiswa nanto
Inguqulelo yamvanje yeSemaphore Kernel
IiApp zikaGoogle eziguqulweyo
Nava Luncher kunye neHolo Launcher
Ukulungiswa kweGPS kulungiselelwe ubuninzi kunxibelelwano olukhawulezayo
Uluhlu olukhulu lwee-APN's
IHuguemem Patch yokufumana i-RAM engama-396 okanye engama-404 Mb
Lungisa ukurekhodwa kwevidiyo ye-HD kunye nokudlala kwakhona
Nobloat, isicelo sokukhupha ngokulula iinkqubo zenkqubo.
Umlawuli womsebenzi we Samsung Galaxy S3
I-OTA kwimenyu yokuseta.
Izidingo zokukhanyisa le rom
Iimfuneko ze flash Le rom kwisixhobo sethu iyafana njengesiqhelo, emva koko ndiza kubala:
Yiba nemodeli ye-Samsung Galaxy S yeGT-I9000
Umsi kunye nokulungiswa okulungisiweyo, Ukubuyiselwa kweClockworkmod.
Ibhetri ihlawuliswe kumthamo we-100 x 100
ukususa iibhagi kwi-USB yenziwe isebenze kuseto lwetheminali ukuba ikhanyise.
Nandroid Backup mhlawu ngephutha
Ikopi yefolda ye-EFS mhlawu ngephutha
Iifayile ziyafuneka ukufaka i-rom
Ngokuba nezicelo zemveli ze Uphando njengeGmail okanye Play Store siya kufuna kuphela ifayile ye-zip ecinezelweyo ufakelo oluchanekileyo kunye nokudanyaza kwe-rom.
Nje ukuba i-zip ikhutshelwe, siya kuyikopa ngaphandle kokudakumba kwingcambu ye sdcard yangaphakathi isiphelo ukuze sikhanyise, emva koko singaqala kwakhona ngaphakathi Indlela yokuFumana kwaye ulandele imiyalelo edanyazayo.
Indlela yokudanyaza yaseRoma
Ukunyuka kunye nokugcinwa kwaye sifomatha i-cache, idatha, idatha kunye nenkqubo.
Khetha i-zip kwi-sdcard
Kungenzeka ukuba kufakelo lokuqala kuphela i-kernel eqhotyoshelweyo eya kuthi ikhanyise, siyakwazi oku ukuba ihlala ixesha elide kwiscreen se ukuqalelisa okanye del Intsimbi yeSemaphore.
Ukuba kunjalo, kuyakufuneka uphinde ungene kwifayile ye- Indlela yokuFumana kwaye uqhubeke ukhanyise i-rom ukusuka kwinqanaba le-7.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo, Uyigcina njani ifolda ye-EFS, I-Samsung Galaxy S, uyifaka njani i-Rom ngendlela ecocekileyo
Khuphela - I-Rom Android 4.2.2 AOKP yeqela leTsunami X yeqela
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S, iRom Tsunami X4.5 uhlaziyo 9/3/13
Izimvo ezi-49, shiya ezakho
Molo uFrancisco, ndikulandele okoko ndafumana i-I9000 yam kwaye inyani kukuba ndiyonwabile ngezithuba zakho. Ndine-Elite RC2 efakiweyo kwaye ndenza kakuhle, kodwa ke, le yokugqibela iyandilinga ... Uyibona njani? Ukubulisa
Into elungileyo kukuba uyizame kwaye ufumane izigqibo zakho.
Nge-10/03/2013 ngo-17: 02, «Disqus» wabhala:
Ifakiwe, kodwa ihlala indinika impazamo yenkqubo "ye-android.porocess.media iyekile" kwaye ayizukundivumela ndenze nantoni na. Uncedo oluthile?
Faka ukubuyisela kwaye usule i-cache kunye ne-dalvik cache
Nge-10/03/2013 ngo-21: 24, «Disqus» wabhala:
UJhonnatan Verastegui sitsho
Ungathini nge-corduroy yam, ndizamile izisuli ozicebisayo kodwa khange zisebenzele mna, ekugqibeleni kuye kwafuneka ndikhanyise ixesha eli-1 (emva kwempazamo) kwaye yindlela eyahlala ngayo. QAPHELA: Ndiyacacisa, ukubengezela kwesiqhelo njengokutsho komhlohli (kwavela kwi-RC2 ye-Elite), yahlala kwi-bootload yaphinda yakhanyisa kwakhona (njengoko umcebisi ecebisa), ndigqibile kwaye ndafumana impazamo, emva koko idanyaze (ixesha lesi-3) ngaphandle kokosula kwalo naluphi na uhlobo, kwaye kwathatha ixesha elincinci ukuphuma kwi-bootload kodwa xa ibotshwa ayikhange indinike enye impazamo.
Phendula Jhonnatan Verastegui
UJose A. Pazo sitsho
Khange ndigqibe ukuvavanya okokugqibela kwaye sele uyibekile le, kwaye ukongeza kwiTsunami, endihlala ndiyithanda kakhulu. Ngokukhawuleza, ndiza kuzama kwaye ndikuxelele. Enkosi kakhulu kuFrancisco.
Phendula kuJose A. Pazo
Ndijonge phambili kwizimvo zakho
Nge-10/03/2013 ngo-17: 12, «Disqus» wabhala:
UJose Ignacio Prieto obambe umfanekiso sitsho
Molo uFrancisco..Buza ukuba ungafaka kwi-Elite RC2 okanye senza ntoni ukusuka ku-2.3.6?
Phendula kuJose Ignacio Prieto
Inokuba ngokugqibeleleyo, landela nje imiyalelo edanyazayo ye-rom.
Ndiyishiyile ixesha elide i-tsunami, okoko bakhupha uhlaziyo kwaye akukho mntu uthethileyo, kuba ndingathembanga kakhulu, andizange ndihlaziye kwaye nditshintshe, kwaye inyani kukuba andizazi ukuba ndihlale kweliphi.
Eyona nto intle kukuhlaziya amaxesha ngamaxesha kwaye uzame umsebenzi omtsha kuba eyona nto ikhoyo ngoku kunye neyona ilungileyo kwiiveki nje ezimbini iya kuphela.
Andikwazi ukukhuphela ifayile ecinezelweyo, ndicofa kwi-TSUNAMI X 4.5 Galaxy S GT-I9000 kwaye ayenzi nto. Ngaba ukhona umntu onokundinceda? Enkosi
I-LINK ILUNGILE, ZAMA NOMNYE UMTSHINTSHI, YIBA YI-GOOGLE CHROME OKANYE ENYE
UDorian Hernandez sitsho
Molo ngokuhlwa, ndine-galaxy s i9000t ene-2.3.3. Inokuhlaziywa ukusuka apha okanye kufuneka ndenze enye into. Enkosi ngoncedo
Phendula uDorian Hernandez
UDorian H. sitsho
Molweni ngokuhlwa nje okuhle. Ndingayiphucula i-gt i9000t ukusuka kwi-2.3.3?
Phendula uDorian H.
Khumbula ukuba esi sifundo se-gt-i9000.
Ayisiyo yakho imodeli yesiphelo.
Nge-11/03/2013 ngo-01: 43, «Disqus» wabhala:
Ifakelwe kwaye ukuza kuthi ga ngoku yonke into enkulu, ndinophawu oluncinci kuphela xa kuthelekiswa nale bendinayo ngaphambili. Ndilandele ukufundiswa kwileta kunye neengxaki ezi-0. Enkosi ngezi zifundo.
Kudala ndikulandela, kuba ndicinga ukuba yindlela elula yokuhlaziya i9000 yethu, nangona kunjalo, ngeli xesha kwenzeke impazamo kum, kwaye oko kukuthi emva kokufaka i-rom, njengoko uchazayo, Ifowuni ayinayo idatha yokuzula, i-wifi isebenza ngokugqibeleleyo, kodwa nje ukuba ndiyisuse, andisenayo i-Intanethi kwaye ndakhangela iindlela zokujonga ukuba ngaba ukuzula kwedatha kuyekisiwe, kwaye kwavulwa kwakhona, ndazama ukuqala kwakhona, kwaye akukho nto, wena ndicebise ukuba ndikhanyise kwijvu kwaye ndiyifake kwakhona le rom ngokucocekileyo ??
Ngena i-APN kwaye wenze entsha ngoqwalaselo lwedatha yenkampani yakho.
Ngo-Matshi 11, 2013 18:57 PM, Disqus wabhala:
Ndikulungele, kwaye ndadala i-APN entsha kunye nenkampani yam kwaye isebenza ngokugqibeleleyo, enkosi ngoncedo lwakho 😀
Ndiza kuhlala ndilinde izithuba ezitsha ngohlaziyo olutsha kunye neerom ukuzivavanya.
Wenza umsebenzi omkhulu ukuqokelela lonke ulwazi kunye nokusinceda. Kwakhona, enkosi kakhulu.
Molo, ndingu-newbie apha .... iphi okanye i-APN,
Eyona nto intle kukuba ufomatha yonke into ngaphandle kwe-sd yangaphandle kunye nekhadi le-sd, ukuba loo nto ayenziwanga inokunika fc ezininzi.
Inye into uFrancisco, ngaba iROM ayizukukroba kubengezela, ukufomatha ukusula njl. Kule nqanaba esiya kwiROM ngosuku, ndiye ndakwazi ukubeka ezimbini ngobusuku obunye kwaye ndilale ngenkqubela phambili ye-titanium.
Sukuba nexhala, akukho nto yenzekayo ngememori ye-rom.
Ukuba akunjalo, eyam kufuneka inyibilike kudala.
Nge-11/03/2013 ngo-20: 46, «Disqus» wabhala:
UFrancisco ikhonkco lokukhuphela i-rom alisebenzi?
USandy Montana sitsho
Molo mhlobo. Ndiyi-Gingerbread 2.3.6 Kernel 2.6.35.7-i9000XXJVS umbuzo wam lixesha lokuqala endiza kuyenza le ROM, ngaba kuya kufuneka ndikhuphele ingxelo yokuqala? oh ndingayibeka kolona hlaziyo ndisebenzisa umqhubi we-DIGITEL! ungandinceda? kuloo nto engekho zingqondweni! Enkosi
Phendula uSandy Montana
Emva kokuzama iirom ezininzi, ndikhetha iTsunami, ngobushushu, ubomi bebhetri ... kwizinto ezininzi. Kodwa ndihlala ku-4.4. Ngale 4.5, ukhetho oluninzi luye lwanyamalala, iingxaki ngokudityaniswa kwebluetooth, kunye nedatha ... nayo eyanyamalalayo. Ngethamsanqa bendine-RemICS-JB-4.2 esandleni, ebisalinde ukuvavanywa (umbono wokuqala awulunganga, kodwa yenza isixhobo ukuba sicothe kakhulu, kufuneka ndivavanye ufakelo olucocekileyo) kwaye ndakwazi ukutshintsha. Kodwa into endiyithethileyo, ndibuyela kwiTsunami 4.4
Uxolo ... ukuya ku-4.2
Molo ekuseni uFrancisco, sele ndikhupha iTsunami. Ndinombuzo, ngaba kunokwenzeka ukubeka iiapp zikaGoogle ezingaguqulwanga? Ngokwam, andiwuthandi umxholo oguqulweyo kwaphela, undenza ndingakhululeki ngokuqinisekileyo kuba khange ndizinike ixesha elifanelekileyo lokuqhela, nangona ndikhetha oqhelekileyo. Inga? Ngaba ikhona indlela yokwenza, ukukhuphela i-zip njengakwiinguqulelo zangaphambili zeROM?
Hee! Nam ndinomdla woku… kwiiSetingi> Tsunami x OTA> IiAddons kunye nePortings, ndikhuphele i-zip ebizwa ngokuba yi-MMS Stock Not Inverted, ndiyifakile ekubuyiseleni, kodwa akukho nto… Ngaba ndingenza nto ngayo?
I-rom ilunge kakhulu kwaye inamanzi kodwa le rom indinika iingxaki zokunxibelelana nebluetooth yemoto, ayiqhagamsheleki… kwaye ngaphambili nezinye iirom ayi… ingaba yintoni?…. kwaye anditshintshanga imodem yam ixesha elide, i-AUCKF1, esebenza ngokugqibeleleyo ... ngaba ukhona umntu onesisombululo soku? ...
Mva kwemini, ukusuka vzla. mhlobo ikhonkco lokukhuphela alivuli!
Naziphi na iingcebiso, Imibuliso.
Ndihlala ndihlala kwiTsunami, ndicinga ukuba zezona zilungileyo. Ukusetyenziswa kwebhetri elungileyo (ngaphakathi kwento ephekiweyo yarom), iinketho ezingapheliyo zokumisela, ukufudumala, ukusebenza ngokuchaseneyo ...
Ndiza kufaka olu hlaziyo, endingazi ukuba luya kuba lolokugqibela na. Ndiyathandabuza kancinci ukuba iGlass yethu iyakubambelela ekuqinisekiseni isizukulwana esilandelayo ngeKey Lime Key ...
Molo uFrancisco, ndikulandele okwethutyana kwaye inyani kukuba yonke into icaciswe kakuhle kumxholo wamaRom yenza ukuba ifowuni yethu ibe nobomi obude ...
Ndinebhokisi yengcambu yevanilla kwaye ndonwabile ngayo… bendifuna ukukubuza umbuzo… xa uza kwenza isifundo kwikhompyuter ye-samsung galaxy 10.1 ?? 0 endicinga ukuba ndiyivile nawe Ndiyabulisa kwaye Enkosi.
Molo, idatha ye-intanethi ayisebenzi kum ... Ngaba umntu othile udlulisile kuwe nasiphi na isisombululo ngaphandle kokuphinda uphinde ukhanyise?
Ngaba ayizukuba yingxaki nge-apn? apn ibingekho .. emva koko ndiyilungiselele kwakhona, Jonga kwiphepha lenkampani yakho kwaye idatha yoqwalaselo iya kuvela
Ugqirha arturo camejo sitsho
Molo uFrancisco ndifuna uncedo lwakho kuba bendihlala ndilandela iimbiza zakho kule leta kwaye zintle kodwa oku kwahlukile, ndihlaziye i-firmware yekhamera kunye nekhamera yangemva ye-Samsung galaxy s i9000 iyekile ukusebenza andazi ukuba isombulule, unganceda nceda ?? !!
Phendula u-hector arturo camejo
Isanti montana sitsho
Ndenze yonke into kwileta kwaye yonke into ibimnandi.I-uncio engandiphumeleliyo kukuba ayivuli i-Intanethi kunye neenethiwekhi zentlalo. Ngaba kuphela iwifi whassap isebenza kum kodwa andikwazi ukukhuphela ifoto endithumela yona kuphela nge-wifi? Ndine-VPM yedijithali ekwimeko egqibeleleyo, inokuba yintoni leyo? I-3G indiphakamisile kulungile? Isisombululo esikhawulezayo nceda ungatshintshi kum 🙁
UFrancisco okanye umntu othile, bendikhangela i9000 roms ehambelana necallrec (ukurekhoda umnxeba), ekubonakala ukuba ibotshelelwe kakhulu kwikernel eyayixhasayo, kodwa okwangoku ndifumene kuphela iinguqulelo 2.3, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba zikhona 4.0 enokubakho okunokwenzeka kwe-callrec?
Ibalulekile kum ngoba inakho ukubonisa ukubetha kwabantu endikwenzayo emsebenzini.
ekugqibeleni ngaba kukho umahluko? Ndinomdla kakhulu, enkosi
Kwaye nini iTsunami ye-S2? Ndinee-roms kuvavanywa kwi-Galaxy S ye-xica yam kwaye iyamangalisa! Indenza ndibamonele !! XD
Kwizinto ezimbi ... ngaba ikho enye efanayo kwi-S2? Ndizamile iCyanogen kwaye ... azimbi kodwa awunakuthenga ngezi.
Hlala ubukele ibhlog yethu ukuba kungekudala siza kubonisa uthando oluhle kakhulu
Enkosi uFrancisco ngesifundo kunye nekhonkco, umnikelo omkhulu, kwilinge lesithathu ndifakelwe, ndilungile, enkosi, imibuliso!
… Kwaye iza neTitanun Backup
enkosi kakhulu rom
Ndifuna ukwazi ukuba kutheni ikhamera yam ingasebenzi .. Emva kokukhuphela iinethiwekhi zentlalo .. Iyekile ukusebenza .. Ukuba ungandinceda .. Enkosi kakhulu!
Molo uFrancisco, ndibhalela kuwe kuba ndingathanda ukufaka le ROM kodwa ndingathanda ukwazi kuqala ukusetyenziswa kwebhetri kuba ndivela kwi-rc2 nakwenye, andilazi igama kakuhle kodwa bahlala iiyure ezi-5 kwaye ndicinga ukuyitshintsha kule ROM kodwa ndingathanda ukwazi ngaphambili ukuba uyakwazi ukusebenza kwebhetri
Ingxaki yam ngoku kuba ayifaki unomathotholo. Ndingayifumana njani?
UAntonio Molina sitsho
Okuphambili akubonakali kwiselfowuni, ndenza ntoni?
Phendula u-Antonio Molina
Iziteki ezinetekhnoloji kaGoogle
Ukuvula iselfowuni ukuze uyisebenzise nenye inkampani, esemthethweni okanye engekho mthethweni?